Tsipy kanetibe :: Hitondra fanovana ho an’ny CBT ny birao vaovao • AoRaha
Tsipy kanetibe Hitondra fanovana ho an’ny CBT ny birao vaovao
Vita omaly ny fanamboarana ny kianjan’ny tsipy kanetibe eny amin’ny klioban’ny mpanipy kanetibe eto Antananarivo (CBT) etsy Mahamasina. Naharitra iray volana ny fanatsarana voalohany nataon’ny mpikambana vaovaon’ny biraon’ny fitantanana.
Vao lany tamin’ny volana jolay teo izy ireo ka hitondra ao anatin’ny roa taona. “Hitondra rivo-baovao ho an’ny klioba izahay. Voalohany amin’izany ny fanamboarana ny fotodrafitrasa. Vao ny asa vonjimaika ihany aloha no vita. Mbola mikasa hanangana kianja mitafo izahay. Hangatahana fiaraha-miasa amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra izany”, hoy Rasolonirina Heriniaina, filohan’ny klioba. Hisy fepetra amin’izay ny fampidirana olona ao amin’ny kianja manomboka izao.
Mikarakara fifaninanana ny mpikambana, amin’ny 31 aogositra sy 1 septambra ho avy izao. Nilaza hatrany ny filohan’ny klioba fa “hanokafana ny fanatsarana hoentina ho an’ny CBT io fihaonana hotanterahina eto amin’ny kianjan’ny CBT io”.
Misokatra ho an’ny rehetra ny fifaninanana ho an’ny olon-droa, sokajy vehivavy sy ho an’ny olona telo, sokajy lehilahy. Mpilalao miisa zato no andrasan’ny mpikarakara.
Fiainana klioba :: Nanolotra fanamiana ho an’ny Ajesaia ny Nino Design
Baolina kitra- Afrika atsimo :: Nifindra ao amin’ny klioba Black Léopard i Dax